“ရွှေမြန်မာ”: November 2009
လူတွေကို ပိုပြီး စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းသည် ပိုက်ဆံလား ဒါမှမဟုတ် ပျော်ပျော်နေတတ်သော မိတ်ဆွေများနှင့် ကိုယ့်ရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှ လူတွေလား။
ပျော်ပျော်နေတတ်သော မိတ်ဆွေများရှိခြင်းကြောင့် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပျော်ရွှင်ရကြောင်း လေ့လာမှုအသစ်တွင် တွေ့ရှိရပါတယ်။ အနေအနီးအဝေးပေါ်မူတည်ပြီး မိတ်ဆွေများအကြား အပျော်သက်ရောက်ပုံကလည်း ကွာပါတယ်။ ဥပမာ တစ်မိုင်ခန့်အကွာတွင် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နေလျှင် ပျော်ရွှင်မှု ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းရနိုင်ပြီး ကပ်လျက်တွင် ပျော်ပျော်နေတတ်သော သူတစ်ယောက်ရှိလျှင် အပျော် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရသည်လို့ဆိုပါတယ်။ ထိုမိတ်ဆွေများကြောင့် ရရှိသော
ပျော်ရွှင်မှုသည်လည်း တစ်နှစ်ခန့် တာရှည်သည်ဟု ဆိုထားကြပြန်ပါတယ်။ သင်လည်း သင့်အနီးမှ ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်သော/ပေးနေသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို အမြဲသတိရ/အမှတ်ရနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။
လူတိုင်း ၀န်းကျင်မှ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကို ပျော်ရွှင်မှုဝေမျှနေကြမယ်ဆိုရင် အားလုံးသည် ပျော်ရွှင်မှုများနဲ့ အသက်ရှင်နေသူများ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင်လည်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ခုချက်ချင်းပဲ ဝေမျှခံစားကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုသည် မိတ်ဆွေများထံမှတစ်ဆင့် မိသားစု၊ အိမ်နီးချင်းထိ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေပါလိမ့်မယ်။ မယုံရင် စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ နိုင်ငံတကာ သုတေသီတို့က ပျော်ရွှင်မှုသည် ကူးစက်တတ်သည်လို့
လေ့လာတွေ့ရှိထားကြပါတယ်။ ၀မ်းနည်းမှုသည်လည်း ကူးစက်တတ်သည်ဆိုသော်လည်း ပျော်ရွှင်မှုလောက် မဟုတ်ပေ။ ပျော်ရွှင်မှုသည် တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် သုံးဒီဂရီခန့်ရောက်သွားသည့်တိုင် အပျော်က သက်ရောက်တုန်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။
သုံးဒီဂရီဆိုသည်မှာ မိတ်ဆွေ၏ မိတ်ဆွေမှတစ်ဆင့် အခြားမိတ်ဆွေတစ်ဦထံ ရောက်သွားခြင်းကို ဆိုလိုတာပါ။
ငွေပိုငွေလျှံ သိန်းရာနဲ့ချီရှိခြင်းကလည်း လူတစ်ယောက်ကို ၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပျော်နိုင်သည်ဟု လေ့လာတွေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအပျော်ကျတော့ သုံးဒီဂရီမိတ်ဆွေထံမှ ရသည့် ပျော်ရွှင်မှုထက် မပိုကြောင်း သုတေသီတို့က ဆိုထားကြပြန်ပါတယ်။ စကားပုံတစ်ခု သတိရမိပြန်ပါတယ်။ အဲ ဘာတဲ့ သင်ရယ်လျှင် အားလုံး လိုက်ရယ်လိမ့်မည်။ သင် ငိုလျှင်တော့ သင်တစ်ယောက်ထဲငိုပေတော့တဲ့။ ဟုတ်လားတော့မသိဘူး။ ဒီတော့ စိတ်ချမ်းသာမှုပေးတာသည်လည်း
မိတ်ဆွေများထံမှလို့ သင် ယူဆလို့ရပြီလား။ သင့်ဝန်းကျင်ကို အပျော်များနဲ့ ဖန်တီးချင်ရင်တော့ သင့်ထံမှ ပျော်ရွှင်မှုများကို မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းများကို ခုချက်ချင်းပဲ ဝေမျှပေးလိုက်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုရှိသောသူသည်
အောင်မြင်မှုကို အလွယ်တကူ ဖမ်းဆုပ်ယူနိုင်တဲ့လူသာ ဖြစ်ပါကြောင်း သင့်အား ကျွန်မရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုများ ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ သင်လည်း ပျော်ရွှင်မှုများနဲ့အတူ မိတ်ဆွေများလည်း တိုးပွားပြီး အောင်မြင်တဲ့လူသားတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေမယ်လို့ ကျွန်မ မြင်ယောင်နေမိပါတော့တယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, November 29, 20092comments: Links to this post
လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် အိုင်တီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုသြဇာအရှိန်အ၀ါက တာသွားလှတယ်။ အိုင်တီရဲ့သြဇာဟာ တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းကိုလည်း ရိုက်ခတ်တယ်။ မိသားစုအလိုက်၊လုပ်ငန်းတွေ၊ အလုပ်သမားစွမ်းအားစုတွေ နောက်ပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ရပ်လုံးကိုလည်း ရိုက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိုင်တီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုသြဇာဟာလူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အပေါ်ကျတော့ တူညီမှု မရှိပြန်ဘူး။ အင်းပြောရရင် အိုင်တီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရလဒ်က ပညာဥာဏ်အဆင့်မြင့်သူက ပညာဥာဏ်အဆင့်နိမ့်သူထက် ပိုပြီး ခံစားရနိုင်တယ်လေ။ ဒီလိုဘဲ ပညာကွဲခြားသွားတာနဲ့လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ၀င်ငွေအနည်းအများက ကွဲပြားခြားနားသွားစေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ သူများ ပြောလို့သာ အိုင်တီရတယ် အိုင်တီဆိုတာ ဘာလဲ။ ဒါဟာ ပြန်စဉ်းစားရမဲ့အချက်ပဲနော်။ သတင်းအချက်အလက် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ(အိုင်တီ) ဆိုသည်မှာ အင်းအလွယ်ဆုံး ပြောရရင် ကွန်ပျူတာစနစ်ကို အသုံးချခြင်းကို ခေါ်ဆိုတာပဲ။ တစ်နည်းပြောရရင် အိုင်တီပေါ်ပေါက်လာတာနဲ့အမျှ လူတွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လုပ်အားတွေကို သက်သာစေပြီး တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ၊ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာကိုမြန်ဆန်ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက် အောင်မြင်မှုမြန်ဆန်လာတာကို တွေ့ရှိရတယ်။ ဒီလိုဘဲ အိုင်တီပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့လို အမျိုးသမီးများအတွက် အမျိုးသားများနဲ့ တန်းတူ အလုပ်လုပ်ဆောင်လာနိုင်သလို ၀င်ငွေလစာဟာလည်း တန်းတူနည်းပါး ရရှိလာခဲ့ပြီလေ။ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ ပြောင်းလဲလာနေတဲ့ အိုင်တီခေတ်လို့ ဆိုရတော့မှာပေါ့။ ခုခေတ်အမျိုးသမီးများဟာ အမျိုးသားများနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး မျက်စိဖွင့်နားဖွင့် လုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြတာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ရမလိုတောင်ဖြစ်နေရပြီလေ။ ကျွန်မကရော အိုင်တီဆိုတာ နားလည်ပြီလား။ အိုင်တီပိုင်းကိုလေ့လာရင်ကော မတိုးတက်နိုင်ဖူးလား။ ကျွန်မလို နလပိန်းတုံးတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းထဲ အတွေးတွေ ၀င်လာခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ ဒါဟာ ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ အိုင်တီကြောင့်ပေါ့။ ကျွန်မလည်း ဒီတိုးတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲ လူတွေထဲမှာ ကြိုးစားရင် ပါလာနိုင်တော့မှာပေါ့နော်။ သူများတွေ ရှေ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မက နောက်ချန်နေရစ်ရရမလား။ ငါကော ကြိုးစားရင် မဖြစ်နိုင်ဖူးလား။ ခုမှ စတင်မဲ့လမ်းအတွက် တစ်ခါတလေ အားငယ်မိတာတော့ အမှန်ပါ။ စမ်းတ၀ါးဝါးလျှောက်နေတဲ့လမ်းမှာ ငါဟာ လမ်းဆုံးကို လျှောက်နိုင်ပါ့မလား။ ငါ့လို ဘာပညာဘာအစွမ်းအစမှ မရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် အိုင်တီနဲ့နီးလာမလား။ ဝေးနေသေးလားဆိုတာကို ဆန်းစစ်ရင်း အိုင်တီလောကကြီး အမြဲတည်တံ့ တိုးတက်အောင်မြင်နေပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိပါတော့တယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, November 29, 2009 No comments: Links to this post
အကြောင်းအရာက: နည်းပညာ, ဆောင်းပါး
(A good website for teachers, parents and others working with children with learning disabilities. Read articles about whyachild is struggling in school and get teaching strategies
and techniques for teching those students. Visit the online bullentin boards to exchange ideas and experience with fellow teachers)
(This website has internet-based lesson plans and class-room activities with printable sheets as well as hundreds of links to related websites)
(This websites includes after fun games and hints for parents and teachers about what activities to organize. The websites also helps parents keep all kinds of after school activities
healthy and safe. There isasection with plenty of links, which have all been checked for appropriate family content)
(You can get new teaching techniques from this website. It is packed with discussion questions, writing assignments and student activities that you can use to create your own lesson
(You can find tips provided by US department of education for students, parents, teachers and administrators on how to giveachild necessary attention and support. In the 'helping
your child' series there are tools and information to help children succeed in school and life)
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, November 28, 2009 No comments: Links to this post
သင့်ပုံရိပ်ကို ရယ်စရာကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးမည့် ကြည့်မှန်
လူတွေကို အနှောင့်အယှက်ပေးရန် နည်းလမ်း ၁၀၁ သွယ် နှင့် ကာတွန်းရေးဆွဲနည်းဝက်ဘ်ဆိုက်
(Funny riddles and great optical illusions, mostly three dimensional pictures, which show different images depending on the angle you look from)
(See 101 ways to annoy people)
(games for kids, parents or teachers)
(games grouped by age-appropriate levels. They have crossword puzzles and the interactive possibility to create your own hero by combining various costume parts.)
(If you like cartoons and want to learn how to do it, while adding your own creativity, visit this website)
(cartoons online, hundreds of games featuring the world's biggest cartoon stars)
(If you want to make your own cartoons try this site. If has hundreds of games featuring the world' biggest cartoon stars)
(Check out the great animations and moving pictures from the cartoonist Mark Fiore; turn on your speakers before visiting this website)
(jokes, information and sketches of stand-up comedeans, including characters from the TV series South Park. Pull your mouse over the character and it starts talking)
(funny movies with bloopers. To visit this site, it is recommended that you useabroadband connections or go toacyber cafe)
(Funny pictures and screensavers can be found on this website. Also find e-cards to send to your friends and different categories like animal, cat and dog jokes)
(This website shows daily cartoons, including business, computer and medical cartoons, by one of America's most widely published cartoonists)
အကြောင်းအရာက: Website index
လူတစ်ဦးသည် နှစ်သက်စွဲလန်းရာ ၀ါသနာတစ်ခုကို စောက်ချလုပ်မြဲဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုဝါသနာသည် မည်မျှအကျိုးရှိစေမည် အကျိုးယုတ်စေမည်လို့ ကိုယ့်ပိုင်စဉ်းစားဥာဏ်နဲ့ တွေးတော ဆင်ခြင်သင့်ပေသည်။ စွဲမြဲသင့်တဲ့ ၀ါသနာကတော့ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အမျိုးမျိုးဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိနေမည်မှာအမှန်ပင်။ လူတိုင်း သူ့အာရုံနဲ့သူ လုပ်ချင်တာ ဖြစ်ချင်တာကို လုပ်နေကြမယ်လို့ မြင်မိပါသည်။ ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေ အဲ လူငယ်တွေဆိုလို့ ကျွန်မ သူငယ်ချင်း နန္ဒ တစ်ယောက်ကတော့ နင်က ဘယ်ခေတ်ကလဲလို့ ကျွန်မကို ပြောဖူးပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မကလည်း ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူရင် ခေတ်မတူသလိုပဲ ခံစားမိတတ်သည်။ ကျွန်မ ၀ါသနာကတော့ စာဖတ်ခြင်းနဲ့ စာရေးခြင်းကို အားသန်ပါသည်။ ကျွန်မအမြင်ကို ပြောရရင် စွဲမြဲသင့်တဲ့ ၀ါသနာတွေထဲမှာ စာဖတ်ခြင်းကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်အလေးပေးပါသည်။
စာပေသည် အိမ်တွင်း၌သာ ရှိသည်ဆိုတဲ့အတိုင်း စာအုပ်ဆိုင်၊ ကျောင်း၊ နေရာတိုင်းတွင် စာပေရှိနေသည်။ အင်း တစ်နည်းပြောရမယ်ဆိုရင် စာပေသည် လူတိုင်းရဲ့ လက်တစ်ကမ်းအကွာတွင် ရှိနေသည်။ ဒါကြောင့် မှတ်ဖွယ်မှတ်ရာ၊ ထိုထိုစာကို၊ ရှာ၍မပြတ်၊ အိမ်တွင်ဖတ် လို့ဆိုစကားအတိုင်း ကျွန်မကတော့ စာဖတ်နေရရင်လည်း ပျော်နေပါသည်။ ကျွန်မကို မေးဖူးတယ်။ ခု ကျွန်မ webpage မှာ စာတွေတင်တယ်။ စာတွေရေးတယ်။ အမြင်တွေဖလှယ်တယ်။ ဆိုကြပါစို့... တစ်နည်း ကျွန်မ ဖတ်တဲ့ စာအုပ်တွေထဲကနေ ကောက်နုတ်ချက်တွေ တင်ပြနေတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲ ကျွန်မကို မေးတဲ့မောင်လေးတစ်ယောက်က အဲဒါတွေလုပ်တာ ဘာဖြစ်လဲတဲ့။ ပိုက်ဆံရလားတဲ့။ ကဲ... သူ နားလည်ထားတာ ဘယ်လိုလဲ။ ကျွန်မရဲ့အမြင်ကို ဘယ်လိုဆိုတာ ရှင်းပြရင်တောင် နားလည်နိုင်ပါ့မလား။ ဒီတော့ လောကမှာ လူတွေအများကြီးရှိသလို အမြင်မတူတာတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်လေ။ သူများအတွေးနဲ့ ကိုယ့်အတွေးဆိုတာ တူနိုင်ပါ့မလား။ အဲ စာဖတ်တဲ့သူ စာပေကို မြတ်နိုးတဲ့သူဆိုရင်တော့ မူပဲ ကွဲမယ် အမြင်တော့ ဖလှယ်လို့ရမယ်ထင်မိပါတယ်။
ခုလူငယ်တွေ တော်တော်များများက ကိုယ့်ထက်အသက်လေး နည်းနည်းမကြီးလိုက်နဲ့ ဒိတ်အောက်နေပြီလို့တောင် ပြောနေကြတယ်မလား။ ပညာဆိုတာ ဘယ်ကရတာလဲ စာပေက ရတာပါ။ ဗဟုသုတကရော ဘယ်ကလာတာလဲ စာပေတွေကပါပဲ။ စာပေဆိုတဲ့နေရာမှာ ဖတ်သင့် မှတ်သင့် လေ့လာသင့်တဲ့အရာနဲ့ အတုမခိုးသင့်တဲ့အရာဆိုပြီး ကွဲတဲ့ထဲက ကောင်းတာ မကောင်းတာကို စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ရပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ လက်လှမ်းမှီသလောက်ပေါ့လေ။ ကျွန်မမှာ ရှိတဲ့စာအုပ်တွေကို ဝေငှဖတ်ရှုစေပါတယ်။ အဲ စည်းကမ်းရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အင်း ဒါနဲ့ ပြောရဦးမယ် ဟိုတစ်လောက အိမ်နားမှာ မီးလောင်တော့ ကျွန်မ မရှိဘူး။ ဒါနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မီးလောင်တယ်လို့ပြောတာနဲ့ ကျွန်မရဲ့ စာအုပ်စင်(အိမ်နံရံမှာ ကပ်တင်ထားတာပါ) ကို ပြေးကြည့်မိပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ဆက်တည်း ပြောမိပါတယ်။ စာအုပ်တွေကို ထုပ်ပိုးလည်း မထားဘူးလို့ ပြောတော့ မေမေတို့က လူတောင် ဘယ်ပြေးရမှန်းမသိဘူး နင့်စာအုပ်တွေကို ဘယ်နေရာ သယ်သွားရမှာလဲတဲ့။ နင့်ဘာသာ ဗူးတွေထဲ ထည့်ထားပါလားတဲ့။ ဒါနဲ့ အသာငြိမ်နေလိုက်ရတော့တယ်။ မငြိမ်လို့ကလည်း မရဘူးလေ။ တစ်လက်စတည်း ဆူပါလေရော စာအုပ်ဖတ်နေရရင် ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့တဲ့။ ပြီးတော့ ၀ယ်လိုက်ရတဲ့စာအုပ်တွေတဲ့ နင် အိမ်မှာ မနေနဲ့တော့ နင့်စာအုပ်တွေပဲထားတော့ စာအုပ်တွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေပြီလို့ ပြောတော့ ရယ်ပဲနေလိုက်တော့တယ်။ ကျွန်မက ဖတ်ပြီးရင် အရမ်းကြိုက်ရင် မှတ်သားထားတဲ့အကျင့်ရှိသလို သူများကိုလည်း ဖြန့်ဝေတတ်တဲ့အကျင့်က ရှိနေတော့ ဟိုတစ်ရက်က ရွှေညာသားက လှမ်းမေးတယ်။ အစ်မ ဘာတွေလုပ်နေလဲတဲ့။ ဘာမှမလုပ်ဘူး။ လိုက်ဖတ်နေတယ်လို့ပြောတော့။ စာအုပ်တွေကနေ ပြန်မရေးတော့ဘူးလားတဲ့ ပြောပါလေရော။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မက ကောက်နုတ်ချက်ဆိုပြီး တင်ရတာနဲ့ ဘယ်စာအုပ်က ပြန်တင်ပြတာတို့ဘာတို့ ရေးတော့ သူလည်း ကျွန်မကို ကော်ပီလို့ ထင်ရင်လည်း ထင်မှာပေါ့လေ။ ဒါကတော့ သူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင် မတူတာတွေရှိမှာပေါ့။ ကျွန်မ နားလည်ပါတယ်။
အဲ နောက်တစ်ခုက လူတွေက ဟော့နေတဲ့သတင်းတို့ ဘာတို့ တင်စေချင်သေးတယ်။ ဘယ်သူကတော့ ဘယ်လို၊ ဘယ်သူကတော့ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ ဆိုက်တွေမှာ တင်ကြတာ ဖတ်မိပါတယ်။ ကျွန်မကိုမေးတဲ့သူက မေးတယ် မတင်ဘူးလားတဲ့။ ကျွန်မကတော့ မတင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်အကြောင်းတောင် ကိုယ်ဘာသာ လေ့လာနေတုန်းရှိနေသေးတာလေ သူများအကြောင်းဆိုတာတော့ မပြောနဲ့တော့ လေသံကြား ဖမ်းတရားနာရမယ့်အလုပ်ကိုတော့ ကျွန်မ မလုပ်တတ်လို့ပါလို့ ပြန်ပြောမိပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ စာဖတ်ပြီး သူများအမြင်နဲ့ ကိုယ့်အမြင်ကို လေ့လာဝေဖန်သုံးသပ်တာကိုပိုသဘောကျတယ်။ ဒါကြောင့် တွေ့ရာ နီးစပ်ရာလူတွေကို စာဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။ ကူညီတယ်။ အားပေးတယ်။ ဒီနေ့တောင် အလုပ်ကအပြန်မှာ လိုင်းကားစီးတော့ ညီမလေးက မင်းခိုက်စိုးစန် စာအုပ် ငှားလာတယ်တဲ့။ အင်းပေါ့ ယူကြည့်လိုက်တယ်။ ဘေးမှာက သုံးယောက်ထိုင်ခုံဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ကပ်ကပ်သပ်သပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင်ပြေသလိုပေါ့ ထိုင်လာတာ စာအုပ်ကို ယူကြည့်တော့ အဖုံးဒီဇိုင်းကို အရင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အဲ သတင်းစာမှာ ကြေငြာထားတဲ့စာအုပ်ပဲ ဥာဏ်စမ်းလည်းမေးထားတယ် ၁၀ သိန်းဆိုလားပဲ။ မင်းခိုက်စိုးစန် စာအုပ်အကုန်လုံးက မူပိုင်လား မပြောတတ်ဘူး။ နေမျိုးဆေး ဆွဲတာတွေပဲ တွေ့ရတယ်။ မဆိုးဘူးပဲပေါ့။ ကြည့်နေတုန်း ဘေးက ကောင်လေးတစ်ယောက်က အမ ခဏလောက်ဆိုပြီး ယူကြည့်တယ်။ ဒါနဲ့ နောက်မှာ ထိုင်တဲ့ ညီမလေးက တစ်ခါဖတ် ၂၀၀ တဲ့ နောက်လိုက်တယ်။ ကောင်လေးက ရပါတယ်ဆိုပြီး ဖတ်နေတယ်။ ခဏနေတော့ ပြန်ပေးတယ်။ ရပါတယ်ပေါ့ အမတို့ မဆင်းသေးဘူးလို့ပြောတော့ ၂၀၀ ပေးရမှာစိုးလို့တဲ့။ ညီမလေးက ထပ်ပြောတယ်။ ခုတောင် ၂၅ ကျပ် ကျနေပြီလို့ပြောတော့ ၁၀၀ ပေးပါမယ်တဲ့။ အဖုံးက မိုနာလီဇာပုံလေ။ ဒါနဲ့ ကောင်လေးက ဆက်ပြောတယ်။ ကျွန်တော် စာဖတ်ဝါသနာပါတယ်တဲ့။ ကောင်းတယ် ဖတ်ပါလို့ ပြောတော့ အချစ်ဝတ္ထုကလွဲရင် သိုင်းစာအုပ်တွေလည်း ဖတ်တယ်တဲ့ သြော် ကောင်းတာပေါ့လို့ ပြောပြီး စာအုပ်အဖုံးက မိုနာလီဇာပုံကို သေချာကြည့်ပါလို့ ဘာလိုနေလဲ မေးလိုက်တော့ ကောင်လေးက သေချာကြည့်ပြီး အင်း အစ်မ ပုံမှာ မျက်ခုံးမပါဘူးတဲ့။ ပန်းချီဆရာဆွဲတာ ကျန်ခဲ့တာလားမသိဘူးနော်တဲ့။ ကျွန်မကလည်း နောက်ချင်တော့ သေချာကြည့်ပါဦး ဘာလို့မပါတာလဲ သိလားလို့ မေးလိုက်တော့.... မသိဘူးလို့ ပြောတယ်။ တစ်လက်စတည်း မိုနာလီဇာအပြုံးကရောလို့ မေးတော့ ကောင်လေးက ကျွန်မကို လှည့်ကြည့်ပြီး မိုနာလီဇာပြုံးတာကလည်း အစ်မလောက် မလှဘူးလို့ ပြောပါလေရော... အယ် မင်းကို မျက်ခုံးမပါတာ ဘာကြောင့်ဆိုတာ ပြောအောင်မလားလို့ ကျွန်မ ပြောတော့ ကောင်လေးက ရယ်ပြီး မဟုတ်ပါဘူးအစ်မရဲ့ တကယ်ပြောတာပါ လုပ်နေတော့ ကျွန်မလည်း ဘာကြောင့်ဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူက ကျွန်မကို ပြန်မေးပါတယ်။ ဂြိုဟ်ကြီး ၉ လုံးရှိတာ သိတယ်နော်တဲ့ အင်းပေါ့။ ခုတဲ့ ပညာရှင်တွေက တစ်လုံးကို ဂြိုဟ်အဖြစ် မသတ်မှတ်တော့ဘူးတဲ့။ ဂြိုဟ်အင်္ဂါနဲ့ မညီလို့ ပယ်လိုက်တာတဲ့။ အဲဒီ ဂြိုဟ်ဟာ ဘာဂြိုဟ်လဲတဲ့... အဖြေကိုသိရင် ဖြေပေးကြပါနော်။ ကျွန်မက ဘာကြောင့်ပယ်တာလဲ မေးတော့ စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ရတာတဲ့ သူလည်း မသိဘူးတဲ့။ အကြောင်းအရာကို သေချာပြောပါလို့ ပြောတော့ ကောင်လေးက သူ ဆင်းရမယ့် နေရာရောက်နေပြီလေ။ အစ်မရယ် စကားပြောလို့တော့ ကောင်းပါတယ်။ ထပ်လည်း တွေ့ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကားဂိတ်ကျော်တောမယ့်ပြောပြီး ဆင်းသွားပါလေရော.... ဒါဟာ စာဖတ်ဝါသနာပါသူတွေရဲ့ ဖတ်တဲ့ဗဟုသုတတွေ ဖလှယ်လိုက်တာလို့ ကျွန်မတော့ မြင်မိပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ စာဖတ်ဝါသနာကနေ ဗဟုသုတတွေ ဖလှယ်လိုက်ရတဲ့အတွက် ကျွန်မအရမ်းဝမ်းသာနေမိပါတယ်။ ကဲ ဒီတော့ အပေါ်က မေးခွန်းလေး နှစ်ခုကို ဖြေပေးပါဦးနော်....
စာဆိုတော် ရှင်မဟာရဋ္ဌရဲ့ ကဗျာလေးကို ပြန်ကြားယောင်မိပါသေးတယ်။
စာပေကို ဖတ်သင့်၊ မဖတ်သင့်ဆိုတာ မိမိဘာသာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါတယ်။ အဲ နောက် ဆရာကြီး ပီမိုးနင်းရဲ့ အဆိုကလည်း ရှိပြန်သေး....
"လူကို စိတ်သည် အုပ်ချုပ်၏။ စိတ်ကို ဥာဏ်ပညာသည် အုပ်ချုပ်၏။ ဥာဏ်ပညာကို ဗဟုသုတသည် အုပ်ချုပ်၏" လို့ ပြောခဲ့သေးပါတကား....
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, November 24, 2009 No comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, November 18, 20092comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, November 15, 2009 1 comment: Links to this post
သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အေဒီဆင်သည် သူ၏ စမ်းသပ်ရှာဖွေမှု အောင်မြင်သည့်အတွက်
အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်နေသည်။ ပါတီ တက်ရောက်လာသော သတင်းစာဆရာ
တစ်ဦးက သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အေဒီဆင်ကို
ကံ မလို့ ကျုပ် အောင်မြင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်အောင်မြင်မှုရဲ့
အကြောင်းတရားကို ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဥာဏ်က တစ်အောင်စလောက်ပါပြီး ၀ီရိယက
အေဒီဆင်၏စကားကို အသေအချာ စဉ်းစားကြည့်သင့်သည်။ မိမိတို့၏
လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုခု အောင်မြင်မှုမရှိလျှင် ကံကို ရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီး
ဟု မြည်တမ်းနေကြသည်။ မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းကိစ္စထမြောက်အောင်မှု မရှိခြင်း၌
၀ီရိယ၏ အပိုင်းအစ ဘယ်လောက်ပါသနည်းဆိုသည်ကိုမူ ထည့်တွက်ရမှန်းမသိ
ဖြစ်နေကြသည်။ ကံကိုသာ အကြောင်းတရားအဖြစ် ပုံချနေကြသည်ဖြစ်၍ ၀ီရိယကို
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, November 14, 20092comments: Links to this post
လိုရာစေနိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေက ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, November 13, 20092comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, November 12, 20093comments: Links to this post
''အမရဲ့ညီမလေးနှင်းအပေါ်ထားတဲ့ နားလည်မှုက ဘာလဲတဲ့''
ငါဟာ နားလည်မှု မရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ....
ငါ့အတွက် အလွန်ပဲ ပြင်းထန်လွန်းခဲ့ပါတယ်...
ဖြစ်နိုင်ရင် မင်းကို မမြင်စေချင်ပါဘူး...
နားလည်မှု ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့သူ မဖြစ်ခဲ့မိဘူးနော်
ဒါတွေဟာ အမရင်ထဲက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ မင်းကို ပြောချင်တဲ့စကားတွေပါ။ အမရင်နဲ့မဆန့်အောင် ခံစားမိပါတယ်။ ဘာလိုလိုနဲ့ တို့ညီအစ်မတွေ ခွဲခွာခဲ့တာ နှစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီနော်။ သတိရတယ်။ တစ်ယောက်ထဲရှိနေချိန်မှာ ပိုပြီး လွမ်းမိတယ်ညီမလေး။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, November 11, 2009 1 comment: Links to this post
MCPA Exam @ December 20th MCPA မှ အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများကျင်းပမည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများကို ၂၀၀၉
ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက် (၉း၀၀) နာရီမှ နေ့လည် (၁၂း၀၀) အထိ
ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်တွင်
ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသင်းခွဲများရှိရာ
မန္တလေး နှင့် တောင်ကြီးမြို့များတွင် တပြိုင်နက်
ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း၏
စာမေးပွဲများမှာ အိုင်တီပညာရှင်များအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလို သော
ကျောင်းသူကျောင်းသား များ၊ အသင်းဝင်များအတွက် အရည်အချင်းကို
မှတ်ကျောက်တင်အသိအမှတ်ပြုခံနိုင်ရေး အတွက် ဦးတည်စစ်ဆေးသော
စာမေးပွဲများကို MCPA Certified Fundamental Software
Engineer နှင့် MCPA Certified Network Associate ဟူ၍ Software Engineer
များအတွက်နှင့် Network Engineer ဖြစ်လိုသူများအတွက် ခွဲခြားထားသည်။
၄င်းစာမေးပွဲများမှာ Professional နယ်ပါယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်ရန်အတွက်
အဓိကလိုအပ်သော အသိပညာများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ဦးတည် စစ်ဆေးသော
ပညာရှင်နယ်ပါယ်တွင် စတင်လုပ်ကိုင်သည့် အခြေအနေသို့ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
စာမေးပွဲဝင်ကြေးမှာ (၅၀၀၀) ကျပ်ဖြစ်ပြီး အသင်းဝင်များအား ၁၀
ရာခိုင်နှုန်းလျော့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုသူများသည် နိုဝင်ဘာလ
(၁၆) ရက်နေ့မှစ၍ ကြိုတင်စာရင်း ပေးသွင်း နိုင်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၄)၊
မြန်မာအင်ဖို တက်ခ်၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၆၅၂၂၇၆ သို့
source : mcpamyanmar
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, November 10, 2009 1 comment: Links to this post
အကြောင်းအရာက: နည်းပညာ, မျှဝေခြင်း, သတင်း
လှလို့ နေပါတော့တယ် သခင်ရယ်…
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, November 08, 20093comments: Links to this post
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, November 03, 20093comments: Links to this post
မသိုးသင်္ကန်းပြိုင်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခြင်3း1.10.2009 ရက်နေ့ ညနေမှာ အလုပ်ကနေ ရွှေတိဂုံဘုရားကို သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Mysuboo အဖွဲ့တွေနဲ့လည်း ချိန်းထားတာတစ်ကြောင်း တံမြက်စည်းလှည်းတဲ့စေတနာရှင်အသင်းကလည်း မသိုးသင်္ကန်းပြိုင်ပွဲဝင်တာလည်း ကြည့်ချင်ခဲ့တာကြောင့် ဘုရားမှာ တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါ ဆိုသလို တန်ဆောင်မုန်းလရဲ့ မသိုးသင်္ကန်းပြိုင်ပွဲကို အားပေးကြည့်ရင်းနဲ့ တစ်ညတာ ကုန်ဆုံးစေခဲ့ပါတယ်။ မသိုးသင်္ကန်းကို စနေနေ့ ညနေ ၅ နာရီမှာ ပြိုင်ပွဲစတင်ခဲ့ပြီး ည ၁၀ နာရီမှာ ပြိုင်ပွဲအစီအစဉ် ပြီးဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင် စင်ပေါင်း ၉ စင် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ အပြိုင်အဆိုင် အကျိတ်အနယ် သူ့ထက်ငါ ပြိုင်ဆိုင်နေတာ တွေ့ရပြီး ဘုရားဖူးများနဲ့ ရင်ပြင်တော်မှာ ပြည့်နှက်နေတာဟာ မြန်မာများရဲ့ ချစ်စရာ ဓလေ့စရိုက်တစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပေါ့။ ရက်ကန်းစင်များကို မြောက်ဘက်မုခ် အောင်မြင်နေရာမှာ စီစဉ်ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ထားပါတယ်။ စင်တွေနောက်မှာလည်း သူ့အုပ်စုနဲ့သူ ဆိုကပြီး ၀ိုင်းဝန်းအားပေးနေကြတာဟာ တကယ့်ကို အလွန်ကြည်နူးစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ကျွန်မတို့အဖွဲ့ပါဝင်တဲ့ အသင်းကလည်း စားစရာများ၊ အအေးများ၊ ရေများကို လိုက်လံလှူဒါန်းနေတာဟာဖြင့် မြန်မာတို့ရဲ့ ချစ်စရာ စိတ်ဓာတ်ကို ဖော်ညွှန်းနေသလိုပါပဲ။ အိပ်ချင်စိတ်ကို ဖြေဖျောက်ရင်း သားကြီးရဲ့ ပေါက်ကရပြောတာတွေကို ထိုင်နားထောင်နေရတာဆိုတော့ မျက်လုံးက သိပ်တော့လည်း မအိပ်ချင်ပါဘူး။ လူလိန်ကတော့ သူများပြောတာ နားထောင်လိုက် ဟိုသွားလိုက် ဒီသွားလိုက်နဲ့။
တစ်ညလုံးလည်း တစ်မှေးမှ မမှေးခဲ့ရပါဘူး။ အိမ်ကတော့ ကျန်းမာရေးမကောင်းပဲ သွားတာ ဘာသံ ညာသံ မကြားချင်ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ ည ၁၀ နာရီမှာ ပြိုင်ပွဲကို ရပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ရပ်လိုက်ပေမယ့် သင်္ကန်းက မပြီးသေးတဲ့အတွက် ဆက်လက် ရက်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပထမဆုကိုတော့ အင်ကြင်းပန်းစင်တော်၊ စင်တော် နံပါတ် ၄ က ဆွတ်ခူးရရှိသွားပါတယ်။ နောက်ပြီး အရင်ပြီးဆုံးတဲ့အဖွဲ့ကို ပထမဆုပေးတာလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေက ချည်မကျော် ပိတ်မပေါက်ပဲ ပေအများဆုံးလည်း ဖြစ်ပြီး အပြစ်အနာအဆာ ကင်းတဲ့ မသိုးသင်္ကန်းကို ရွေးချယ်တာဖြစ်ပြီး မနက်လေးနာရီမှာ မသိုးသင်္ကန်းများကို အသင်းလိုက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကပ်လှူပူဇော်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်မတို့လည်း မနက် ၅ နာရီခွဲလောက်မှာ ဘုရားပေါ်မှ ပြန်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။
ဒီနေ့ နိဗာန်ဈေးပွဲတော် ရှိတယ်။ လမ်းတိုင်းမှာ ပျော်စရာကြီးသိလား....
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, November 01, 2009 1 comment: Links to this post
အကြောင်းအရာက: ဗဟုသုတ, ဘာသာရေး